सुनौलो बिहानी ।। Sunaulo Bihani » यो भाइरल जोडिको घर बन्ने भएपछी खुशी हुँदै श्रीमतीलाई बोकेरै नचाए बाजेले…
यो भाइरल जोडिको घर बन्ने भएपछी खुशी हुँदै श्रीमतीलाई बोकेरै नचाए बाजेले…
यो भाइरल जोडिको घर बन्ने भएपछी खुशी हुँदै श्रीमतीलाई बोकेरै नचाए बाजेले…इलाम*का ६८ बर्षका एक वृद्धले आफु भन्दा ४७ बर्ष कान्छी माइधारकि २१ बर्षिय पुजा*लाइ आफ्नी दुलही बनाएर ल्याएको कुरा अहिले सामाजिक सन्जालमा चौतर्फी चर्चामा आएको छ । यो जोडी बास्तबमै अचम्मको छ । वृद्ध बुबाले ल्याएकी मात्र २१ बर्षकि श्रीमती उनकी पाचौं श्रीमती रहेकी वृद्धले जानकारी दिएका छन् ।
दुई श्रीमती*को निधन अनि दुई श्रीमती ले छाडेर गएपछी आफुले पाँचौ श्रीमती ल्याएको बताए उनिहरुको घर बनाउने आज समिति गठन भएको छ । घर बनिने भएपछी वृद्धले जोसिदै कान्छी श्रीमतीलाई काखैमा राखेर माया गरे त्यस पछि उनले बोकेर नचाएर सबैलाई चकित बनाए । आफ्नो छोराले बिबाह गर्न नमाने पछी घर ब्यबहार र साना नाति नातिनाको स्याहार गर्न कान्छी श्रीमती ल्याएको बताए । धेरै नै हसाउने वृद्धले जिस्किदै बोल्दा माहोल नै तातिएको थियो ।
हरेक शब्दमा हसाउने रमाइला बाजे लाइ उनको कहानी सोध्दा खुशी हुँदै सबै बताएका छन । सबैले बाजे लाइ मोहनी लगाएर ल्याएको हो भनेर सोध्ने गरेको कुरा पनि खोलेका छन । आफू धामी भएपनी आफु*लाइ मोहनी लगाउन नआउने बताउने वृद्धले माया पिरतिको कुरा लजाउदै बताए । धेरै जिस्केर बोल्ने वृद्धले जिस्कदै पैसा मागे*पछी एकाएक सबैले पैसा दिन थाल्दा बाजे खुशिले आफ्नी श्रीमती लाई बोकेर घुमाउदै नाच्न समेत भ्याए ।
प्रकाशित मिति November 30, 2019
दि भ्वाइस अफ नेपालबाट रुँदै बाहिरिइन् कम भोट आएपछि मेचु धिमाल
आज उपनिर्वाचन बिहान ७ बजेदेखि मतदान..,५२ पदका लागि कहाँ-कहाँ हुँदैछ मतदान जान्नुहोस् !
आज मंसिर १४ गते शनिबारको राशिफल शंकटा माताको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस्
सागको मुखैमा एथ्लेटिक्स खेलाडी तुलसा साग छाडेर कतार लागिन् !
शनिबार बिहान ७ बजेबाट मतदान सुरु हुने…
बाहुनकी छोरी र विश्वकर्माको छोराबीच भयो मागी विवाह !
८ दिन*सम्म नै श्रम कार्यालय धाउनुपर्ने सास्ती…
प्रचण्ड सहितको टोली कालापानी र लिपुलेक जाने !
माग अनुसार पठाउन सकिएन नेपालको तरकारी यूएई र कतारमा
आज शुक्रबार ह्वात्तै उकालो लाग्यो सुनचाँदीको भाउ..,हेर्नुस तोलाको कति ?
समय सीमा उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन*लाई कारवाही…
नेपाली भूमि मिचेर बनाइएका भारतीय*का घरटहरा भत्काइयो…
आज पनि गयो ५.५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प…